Jacaylkii Barni Seed – dhugasho
maxamedsheekafguun Maarso 10, 2017 sheekooyin, Uncategorized
Maanta waa maalintii barnaamijka jacaylka aan soo qaadan lahayn. Waana sheeko inoo socon doonta oo aad u qiirabadan.
Barni Seed Warfaa aqalkoodu waa ka tuulada oo dhan ugu sumcad xun. Waxaa jirta sumcadxumo la galabsado, tanise waa mid lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey aqalkaas iyo qoyska ku nool in lagu tilmaamo kuwo sumcad xun. Waxaa la yidhaahdaa: “Waxaa ka soo ura saamo iyo subag gorayo”. Waxaa kale oo la yidhaahdaa: “Waxay cunaan oon aan aadamiga kale cunin”. Waxaa kale oo la yidhaahdaa: “Aqalkaas haddii la baadho waxaa laga helayaa ceebo aan caqligu rumaysan karin”.
Waa mutul yara weyn oo saddex qol u kala xidhan. Daaradda ciidda ah waxaa ku wareegsan ood badankeedu baxday oo dhir noqotay. Farasmagaalaha tuulada ayuu bari kaga soo jeedaa, haddii albaabku furan yahayna waxaa la arkaa ilaa docda.
Waa tuulo yar oo gabbalku mar u wada dhaco waaguna mar u wada beryo. Qof waliba waxa uu ku seexdo iyo wax uu ku soo tooso waa laga wada war hayaa. Waa dad yar oo iswada yaqaan, laakiin qoyska Seed Warfaa waa ka keliya ee aan la ogayn waxa uu ku seexdo kuna soo tooso. Waa qoyska keliya ee aan la malayn karin waxa calooshiisa ku jira.
Seed Warfaa isaga oo afar iyo labaatan jir ah markii uu guurdoon noqday hablaha degaanka oo dhan saddex keliya ayuu kala doorasho u lahaa. Boqollaalka kale iyo isagu waxay kala ahaayeen sida geela iyo idaha. Ha yeeshee doorashadii saddexda ku koobnayd ayuu Alle u barakeeyey. Wuxuu calfaday Dhudi oo uu ku badhaadhay, taas oo maanta u haysa lix carruur ah oo caafimaadkoodu taam yahay…
Abwaan c/qaadir xirsi yamyam